မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve(24 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve ထုတ်ကုန်များ)
မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် solenoid valve
tag ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve , DCF-4 Solenoid Valve စျေး , DCF-4 Electromagnetic Pulse Valve
ညာဘက်ထောင့် solenoid solenoid မြှေးအဆို့ရှင် 24V
tag ကို: ဖုန်ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက် Valve Pulse , ဘိလပ်မြေဖုန်ဖယ်ရှားရေး Pulse Valve , စက်မှု Bag အမျိုးအစား Pulse Valve
ဇာတ်စင်ပျက်ကွက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကို အသုံးပြု. ဘုံပြဿနာ analysis ပပျောက်ရေးနေ့နည်းလမ်း installation နဲ့ဒီဘာဂင် အားလုံးအဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်လေယာဉ်မှူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေးယူရှိပါတယ် ဓာတ်ငွေ့အထုပ်များ၏ဖိအားများလွန်းနိမ့်သည်ဖြစ်စေ Check...
မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter ကို Bag
tag ကို: မြင့်မားသောစွမ်းရည် Filter ကို Bag , non-ယက် Nomex Filter ကိုအိတ် , Air ကိုဖုန်ကောက်ခံရေးသည် filter အိတ်
Ackaging & Delivery DetailsStandard ပို့ကုန်ထုပ်ပိုးထုတ်ပိုး: ပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်း Filter ကိုအိတ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ထုပ်ပိုးသည်။ corrugated ဘုတ်အဖွဲ့စက္ဏူထူရက်ပေါင်း 30 လက်ခံရရှိသိုက်ပြီးနောက် outsideDelivery TimeWithin Air ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး Facory...
Butadiene ရော်ဘာ solenoid valve မြှေး
tag ကို: ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် 1 နျ Standard Valve ရော်ဘာမြှေး , အိတ် Filter ကိုရော်ဘာမြှေး Valve , High Quality ရော်ဘာအမြှေးပါး Valve မြှေး
သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မြှေးနည်းပညာလိုအပ်ချက်များ: အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မြှေးလေကြောင်းစောင်ရေထိန်းချုပ်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲလိုအပ်တယ်တဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ယန္တရားဖြစ်တယ်, ကောင်းသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်တယ်,...
Pulse ဂျက် solenoid valve ၏ရော်ဘာမြှေး
tag ကို: ဆန့်ကျင်တည်ငြိမ်သောမှိုရော်ဘာမြှေး Valve , Pneumatic ရော်ဘာမြှေး , အခမဲ့နမူနာ Pulse Valve Solenoid မြှေး
နိယာမအလုပ်မလုပ်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မြှေး: အဆိုပါသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်မြှေးနှစ်ခုလေကြောင်းအခန်းများထဲသို့သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်အပိုင်းသုံးပိုင်း။ လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ဟာသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် solenoid valve အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ညာဘက်ထောင့် solenoid solenoid မြှေးအဆို့ရှင် 24V အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter ကို Bag အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Butadiene ရော်ဘာ solenoid valve မြှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pulse ဂျက် solenoid valve ၏ရော်ဘာမြှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve from China, Need to find cheap မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our မြင့်မားသောစွမ်းရည် Solenoid Valve, We'll reply you in fastest.